Fanaraha-maso ny tosidra tsara karazana Wrist tsara indrindra amin'ny fanandramana ny mpamokatra tosidra sy ny orinasa | MEDORANGER
Smart Monitor amin'ny tosidrà karazana saina amin'ny fitiliana ny tosidra
1. Fanamarinana matihanina, angon-drakitra fandrefesana bebe kokoa (CFDA, FDA, fanamarinana manam-pahefana CE)
2. Ny monitor BP dia mampiasa airbags mba hanerena amin'ny fomba hendry, hahatonga ny fandrefesana ho milamina, haingana ary marina
3. Fijerena fanaraha-maso tosi-drà azo araraotina eran'izao tontolo izao.
4. Fomba oscillometric ampiasaina amin'ny fandrefesana ny tosidra, miaraka amin'ny valiny fandrefesana marina.
5. Fampitana angona Bluetooth 4.0, fandrefesana ora 24 ora, fitahirizana mandeha ho azy ny angona fandrefesana ny monitor BP
Ny mpanara-maso ny tsindry vita amin'ny tanana dia mampiasa ilay 4faha teknolojia famokarana - mandrefesana raha mampitombo ny teknolojia. Afaka ampiasain'ny olona antitra sy antitra, olona matavy loatra sy vehivavy bevohoka. Mampitaha ny milina fampidinana tosidra mahazatra, it’s mora entina, fandidiana tsotra ary mitondra aina; fandrefesana haingana amin'ny milamina sy marina. Izy io dia vokatra fanaraha-maso ny tosidra mandritra ny 24 ora, tsy mitovy amin'ny mercury nentim-paharazana sy ny fanaraha-maso ny sandry tokana, manana portability miavaka; Mandritra izany fotoana izany dia manana fiasan'ny fanaraha-maso ny tosidra tsy tapaka sy tsy tapaka ary ny famoahana ireo tatitra momba ny tosidra miasa ho azy.
Loharanon-kery Batterie Polymer Li-ion 3.7V 210mAh namboarina
izay tokony ampangain'ny charger an'ny
5V 500mA na bateria Li-ion azo havaozina bebe kokoa.7.7V 210mAh
Famakiana herinaratra 5V miaraka amin'ny Micro B USB
USB Port USB 2.0 ho an'ny famahanana bateria fotsiny
Bluetooth Bluetooth 4.0 (fampitana data), Frequency
isan-karazany: 2.4GHz (2402 - 2480MHz), Modulation:
GFSK, Herin'aratra taratra mahomby: <20dBm
Haben'ny fampisehoana 27.6 x 27.6mm
Pressure Mode 5 andro (in-2 isan'andro) aorian'ny fiampangana azy tanteraka
Mode TBPM Andro 1 (in-1 isan'ora) aorian'ny famerenam-bola feno
Haben'ny vokatra 47x 41 x 13.5 mm
Kaontenera 20Feet 31416PCS / 1309CTN
Kaontenera 40Feet 64680PCS / 2695CTN
isan-karazany Fanerena tsindry: 0 hatramin'ny 39.9kPa (0 hatramin'ny 299 mmHg)
Pulsa: 40 hatramin'ny180 Pulses / min
araka ny marina Fanerena ± 0.4 kPa (± 3 mmHg)
Pulse ± 5% amin'ny famakiana
famantarana Tsindry Eny
ny vidim-piainana Mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny paompy anaty rivotra
Fanafahana haingana ny rivotra Mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny Air Valve
TONTOLO IAINANA Temperature 10 ~ 40 ℃ (50 ~ 104 ℉)
Fitaovana Barometrika 80 ~ 106 kPa
Tontolo iainana fitehirizana Temperature -20 ~ 55 ℃ (-4 ~ 131 ℉)
Asa fandrefesana tosidra
Asa fanaraha-maso ny tosidra (TBPM)
Fandrefesana eo am-pikolokoloana teknolojia
Fampisehoana E-ranomainty ambany fanjifana
Azo afindra amin'ny telefaona finday amin'ny alàlan'ny Bluetooth ny data
Fanamarihana: Miankina amin'ny fanovana teknika tsy misy fampandrenesana mialoha.
Fampiharana ny fanaraha-maso ny tosidrà vita amin'ny tànana
1. fitantanana fahasalamana ao amin'ny fianakaviana / 2. foibe fanadinana ara-batana / 3. trano fitaizana be antitra
4. Olona antitra sy antitra / 5. Vehivavy bevohoka / 6. Olona matavy
Fampahalalana amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny nebulizer mesh vibrating
Ny vokatra tombony
Ny fiakaran'ny tosidrà dia "aretina mitaiza" mahazatra, toy ny baomba tsy ara-dalàna, izay mandrahona ny fahasalaman'ny kardia sy ny serebrovaskular amin'ny fotoana rehetra.
Ny fahafatesana tampoka dia tsy "tranga kely azo inoana", ny fiakaran'ny tosidrà dia "fihenan'ny mpamono olona mangina" Ny fiakaran'ny tosidrà dia antony iray mampidi-doza amin'ny fanafihana sy ny fahafatesan'ny aretim-po, ny lalan-dra (trombosis), ny nephropathie, ny lozam-pifamoivoizana ary ny aretina hafa. Ny fiakaran'ny tosidrà dia manana "haavo telo" - tahan'ny mararin'ny aretina, tahan'ny fahasembanana ambony ary taham-pahafatesana avo.
Q1: Nametraka fotoana ny orinasa ary aiza ianao?
A1: Niorina tao amin'ny 2014, ary manam-pahaizana manokana amin'ny vokatra eken'ny fitsaboana. Ny orinasanay anyTianjin City, Tianjin.Shina
Q2: Ianao vevokatra r manana taratasy fanamarinana?
A2: Ie,Ny vokatray dia manana FDA, CE0123, CFDA, sns.
Fanontaniana momba ny filaminana:
F1: Afaka manome serivisy OEM na ODM ve ianao?
A1: Eny, manana ekipa mivoatra matanjaka izahay hanohana ny serivisy OEM sy ODM. Ny vokatra dia azo atao arakaraka ny angatahinao.
A2: 1000 pcs. Ho an'ny fiarahamiasa voalohany dia azo ekena ny baiko 500, saingy somary avo lenta ny vidiny,toy ny fantatrao fa mifototra amin'ny habetsany ny vidiny.
F3: Inona ny santionany ny fotoana fitarihana & ny fotoana fitokanana?
A3: ny santionany tahiry 1 andro, manao santionany 5-7 andro fiasana aorian'ny nahazoanao ny santionanao. Ny fotoana famokarana OEM dia miankina amin'ny volanao, izany’s manodidina ny 45-60 andro.
F4: Inona ny fe-potoana fandoavanao vola sy ny varotra?
A4: T / T 30% toy ny fametrahana, ary 70% alohan'ny fanaterana. Hasehonay anao ny saryna horonan-tsary ny vokatra alohanao farany ny fifandanjana.
F5: Inona ny fe-potoana fandoavanao vola?
A5: FOB Tianjin na CIF ao amin'ny seranan-tsambo alehanao
Teo aloha: Ampiasao avo lenta ambongadiny CMS50D rantsan-tànana fametahana rantsantanana
Manaraka: Thermometer amin'ny klinika elektronika ho an'ny olon-dehibe sy zazakely
Fanaraha-maso ny tosidran'ny ran'i Microlife
Fanaraha-maso ny tosidra amin'ny zaza, Fanaraha-maso ny tosidra, Fanaraha-maso ny tosidra amin'ny fo, Mora ampiasaina amin'ny fanaraha-maso ny tosidra, Fanaraha-maso ny tosidra tsy tapaka, Masinina Icu Ventilator,